Isishwankathelo se SONGZ | Iingoma ze-Songz zeMoto eziMelana noMoya Co., Ltd.
I-SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTDApha kubizwa ngokuba yi-SONGZ, yasekwa ngonyaka ka-1998. Yinkampani ebambiseneyo ejongene nophando, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kweenkqubo zokupholisa izithuthi. Kwadweliswa ngempumelelo kwi-Shenzhen Stock Exchange ngo-2010. Isishwankathelo seStock: SONGZ, ikhowudi yesitokhwe: 002454. Oku kwenza i-SONGZ ibeyinkampani yokuqala edwelisiweyo kwishishini lezothutho laseTshayina. I-SONGZ iyazinikezela kwiinkqubo zokulungisa umoya njengophawu lweprimiyamu kwaye iya kuba ngumthengisi okumgangatho wehlabathi ngobuchwephesha bobuchwephesha kunye nokulungiswa kwendlu kungekudala.
SONGZ Ishishini ligubungela umbane kunye nesiqhelo esikhulu kunye naphakathi kunye nomoya ophakathi webhasi, imeko yomkhweli wemoto yomoya, indawo yoololiwe yokuhambisa umoya, iiyunithi zefriji yelori, isiguquli sombane, kunye nendawo yokulungisa umoya.
I-SONGZ Amashishini amathandathu aphambili
Isiseko soMveliso weZWIZ
Ngesiseko sokwenza i-13, i-SONGZ yenze ubume obugxile eShanghai, China kunye naseFinland, Indonesia nase China e Anhui, Chongqing, Wuhan, Liuzhou, Chengdu, Beijing, Xiamen, Suzhou nakwezinye iidolophu. Inani elipheleleyo labasebenzi lingaphezulu kwama-3,000.
I-SONGZ HQ, iShanghai yaseTshayina
UBukho beNtengiso yeHlabathi ye-SONGZ
Iimveliso zomoya webhasi ye-SONGZ zinikezelwe phantse kubo bonke abavelisi bebhasi e-China, njenge-Yutong, i-BYD, i-Golden Dragon, i-Zhongtong, njl njl. Ezi mveliso zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-40, kubandakanya amazwe aseYurophu afana neRussia, iNgilani, i-Itali, kunye namazwe aseNordic, amazwe aseMelika afana neMexico, iBrazil, iChile, iColombia, ne-Ecuador, amazwe aseAsia afana neJapan, uMzantsi Korea, iNdiya, iMalaysia, iIndonesia, iThailand neVietnam, kwaye athunyelwa e-Australia naseNew Zealand.
Kwangelo xesha, siqokelele inani elikhulu lezixhobo zabathengi kwicandelo leshishini lokukhwela umoya, imoto yoololiwe yokuhambisa imeko yomoya kunye neeyunithi zefriji yelori.
IKIWI eNew Zealand
I-SONGZ abaXhasi abaKhulu boMenzi weeBhasi
Imveliso iye yamkelwa kakhulu ngabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya ngemigangatho ekumgangatho ophezulu njengokugcina amandla, ukhuselo lokusingqongileyo, ukhuseleko, ingxolo ephantsi, intuthuzelo kunye nobunzima bokukhanya.
I-SONGZ ibisoloko ibambelela kwisicwangciso semveliso "esisebenzayo, esonga umbane kunye nokusingqongileyo" kunye "nobuchwephesha obuphezulu, umgangatho ophezulu, inkonzo ephezulu" ingqikelelo yentengiso yezobuchwephesha, ezimisele ukuba yingcali yolawulo lweemoto ezikumgangatho wehlabathi.
ICandelo lokuThengisa lokuThengisa
I-SONGZ yazisa ngezixhobo ezihamba phambili kwihlabathi kunye nenkqubo yolwazi ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwemveliso, uzinzo kunye nokuchaneka.
Izixhobo eziphambili ezinje ngomgca wokuvelisa ngokuzenzekelayo / umgca wokudibanisa, umgca wokufumanisa i-ammonia ngokuzenzekelayo, umgca wokuqhubekeka ngokuzenzekelayo weepleyiti eziguqukayo kunye ne-static vortex, umatshini wokukhawulezisa isantya, umatshini wokuwelda we-argon ngokuzenzekelayo, iziko lokubhaka kunye nomatshini wokuwelda we-laser uyiphucula kakhulu imveliso ukusebenza ngokufanelekileyo.
I-SONGZ idibanisa izixhobo kunye nolwazi kunye ne-Informatization kunye ne-industrialization kwaye yakha umzi-mveliso okrelekrele osebenzisa izixhobo ezinjenge-ERP, MES kunye ne-WMS.
Umatshini wokujonga ngokuzenzekelayo we-Ammonia
Isantya esiphezulu seFin Machine
Oluzenzekelayo Argon Arc Welding Machine
Ngexesha loMzi-mveliso we-4.0, i-SONGZ yakha iifektri ezihambele phambili kwezobuchwephesha, iseka imveliso ekrelekrele, yenza injongo yamashishini akrelekrele, iphucula inqanaba lolawulo lwemveliso yamashishini, yenza ulawulo lwemveliso lube nolwazi ngakumbi-olusekwe, oluzenzekelayo, lwedijithali kunye nolwenzululwazi, luphucula imveliso ukusebenza ngokukuko, kwaye kukhuthaza amashishini Ukuphuculwa kwemveliso.
Uqinisekiso lomgangatho we-SONGZ
Umgaqo-nkqubo womgangatho: Yenza imigangatho yenkqubo kwaye ujolise kulwaneliseko lwabathengi.
Phumelela ulwaneliseko lwabathengi ngemilinganiselo eqhubekayo kunye nokuphononongwa.
Umgaqo-nkqubo wokusiNgqongileyo: Ukhuselo lokusingqongileyo, ulondolozo lwamandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa, ukuphinda kusetyenziswe kwakhona, ukubandakanyeka ngokupheleleyo, ukuthobela umthetho kunye nokuphuculwa okungapheliyo.
Umgaqo-nkqubo wezeMpilo noKhuseleko eMsebenzini: Eyona nto iphambili kwezempilo, ukhuseleko kuqala, ukuthintela inzululwazi, ukubandakanyeka ngokupheleleyo, ukuthobela umthetho kunye nokuphuculwa okungapheliyo.
I-SONGZ inyanzelisa ngokungqongqo i-TS16949 kwaye ijolise kulwaneliseko lwabathengi, ukubandakanyeka ngokupheleleyo kunye nolawulo lomgangatho. Ngexesha lolawulo olungenayo lomgangatho, i-SONGZ iyaqhubeka nokwenza isicwangciso seesampulu zokuthembeka kunye nokuphucula ngokuqhubekayo izixhobo zovavanyo lokuthembeka kweziphumo zovavanyo. I-SONGZ ngoku inezixhobo zovavanyo ezingama-527 ezihlalutya izixhobo zovavanyo ngokweMSA ukuze yanelise iimfuno. Ngaphandle koko, i-SONGZ iqinisekisa ukufana kweemveliso ngophononongo, ulungiselelo kunye noqeqesho lwabathengisi kwaye iqhuba uvavanyo lwethu lomntu wesithathu lwamalungu aphambili minyaka le ukuqinisekisa iinkqubo zomoya ezisebenza ngokukhuselekileyo nezithembekileyo. Ngexesha lolawulo lwenkqubo, i-SONGZ ikhuthaza ukubandakanyeka ngokupheleleyo, ukujongana, ukuhlolwa kokuqala kunye nokugqibela kunye nokujonga inkqubo yonke. Kwiinkqubo eziphambili, izixhobo zovavanyo oluphezulu lwentsebenzo ziyamkelwa ukuqinisekisa ukuthembeka kwemveliso kunye nezixhobo zokufumanisa ngokuzenzekelayo ze-ammonia zamkelwe ngokukodwa ukuqina komoya kwenkqubo yomoya. Izixhobo zovavanyo lokhuselo ezizenzekelayo ezintathu-in-nye zamkelwe ngenjongo yokwanelisa iimfuno zokhuseleko lwemveliso. Uvavanyo olupheleleyo lwenziwa ukuqinisekisa ukhuseleko lwemveliso nokuthembeka. Inkqubo ephambili iphicothwa kusetyenziswa i-SPC ukuqinisekisa uzinzo kunye nokunikezela ngedatha yohlalutyo ekuphuculeni umgangatho.
Ukusetyenziswa kwemveliso ye-SONGZ ngokwempendulo yeemarike, ibonakalise ngokupheleleyo nangokunyanisekileyo imeko iyonke ngophando lokwoneliseka, iqhuba iPDCA kwaye iyaqhubeka nokuphucula umgangatho wemveliso.
ISIQINISEKISO SE-IRIS ISO / TS 22163: 2017
I-SONGZ Iwonga lodonga
Ukusukela ukusekwa kwi-1998, i-SONGZ iphumelele ukoneliseka kunye nendumiso evela kubathengi bethu abavela e-China nakwamanye amazwe njengomthengisi ogqwesileyo kunye nomniki-sisombululo weenkqubo zemeko yomoya.
Oku kufanelekile ngakumbi ukuqaqambisa ukuba i-SONGZ iphuhlise ngokuzimeleyo "iTekhnoloji yezeMveliso kunye nokuSebenzisa iiTyhubhu zeMicro Channel kunye neeTrans Exchangers", kwaye iprojekthi yaphumelela "kwiNzululwazi yeSizwe yaseTshayina kunye neTekhnoloji yeNkqubela phambili yeBhaso", elilelona dumisa liphezulu kwiBhunga likaRhulumente waseTshayina. kumzi mveliso wemeko yomoya wemoto.
Kwaye i-SONGZ iphumelele ukwamkelwa kumzi-mveliso wokupholisa imeko yezithuthi nakuluntu ngegalelo elenziwe yi-SONGZ kuphuhliso lobuchwephesha kumzi-mveliso womoya ohambayo kunye noxanduva kwezentlalo oluthathwa yi-SONGZ.
Umthengisi oGqwesileyo weCRRC, China
Umthengisi oGqwesileyo weFoton, China
Umthengisi oGqwesileyo weHino, Philippines
Umthengisi oGqwesileyo weSANY, China
Iintshatsheli zeNkonzo yeOlimpiki yaseBeijing
IBhaso leNkqubela phambili yeTekhnoloji yeSizwe yaseChina
Isatifikethi sokuvunywa kweLebhu ye-CNAS
ISatifikethi sokuVunywa kweLebhu yeLebhu ye-BYD
Umgaqo weShishini:Lwela ukuphucula imeko yokuphila komntu.
Umbono weShishini:Yiba lihlabathi'kwiklasi yokuqala yomboneleli womoya-moya opholisayo.
Umgaqo-nkqubo woLawulo:Ukwaneliseka kwabaThengi, ukoneliseka kwabasebenzi, ukwaneliseka kwesitokhwe.
I-SONGZ yeNkcubeko yeShishini
Inkcubeko ngumphefumlo wamashishini kunye nengcinga yenkcubeko ngamandla angabonakaliyo okusebenza kunye nolawulo. I-SONGZ ibambelele kwinkcubeko yenkcubeko "ejolise ebantwini" iminyaka.
I-SONGZ ibonelela bonke abasebenzi ngeqonga elikhulu, ivuselela ngokupheleleyo umdla wabo, iyila kwaye ibabonelele ngamathuba afanelekileyo kubo kwaye banethemba lokukhula kunye nabo.
Iqela le-SONGZ leNkcubeko yeHlabathi:
Ukuvuleka kunye nokwahluka.
Ukulula kunye nokuthetha ngokuphandle.
Iqela le-SONGZ Ubulumko
Sebenzisana ngokunyaniseka okungagungqiyo kwaye ujolise kuphuhliso lwexesha elide.
Impumelelo yeshishini ichongwa ngokusebenzisana. I-SONGZ ineqela elilawulayo nelinokuthenjwa elikhulayo kunye nenkampani kwaye likhokelela kubasebenzi ukuba bafezekise iinjongo zabo ngenxa yomanyano olomeleleyo lokuqina, uvakalelo olomeleleyo loxanduva kunye nomoya wokuzimisela ongenakoyiswa.
Yiya phambili ngentliziyo enombulelo, kwaye uvune ubuqaqawuli ngomsebenzi onzima.
I-SONGZ, Yenza ixesha elitsha lomoya ophathwayo!